रूसी अनुभव गुमाएका जो विवाहित एक मेक्सिकन, बारे कुरा, यो घटना । समाचार - रूस
रूसी अनुभव गुमाएका जो विवाहित एक मेक्सिकन, बारे कुरा, यो घटना । समाचार — रूस
यो कथा जस्तै छ एक मेक्सिकन श्रृंखला । छन् अभिनेता को एक धेरै, त्यहाँ छ एक प्रेम त्रिकोण, साथै कुख्यात अपहरण, सारा देश । यो सबै सुरु संग को लोप मा मास्को को मेक्सिकन प्रशंसक फ्रान्सिस्को चटाई. यो रडार देखि पछि तिनीहरू भेट संग एक पल्ट मा एक एक्लो, र सँगै तिनीहरूले हेर्नुभयो विश्व कप खेलमा पेरु, डेनमार्क. हाम्रो मित्र फ्रान्सिस्को गरेको बाहिर भएको भएकोले शनिबार, मा यस्तो लेखे आफ्नो पृष्ठ मा मित्र मेक्सिकन. हामी त्यो थाहा गए द्वारा महिला को नाम. त्यतिबेलादेखि, आफ्नो फोन बन्द छ र जब हामी सम्पर्क गर्न खोजे, यो महिला, त्यो अनुमति थिएन हामीलाई कुरा गर्न र अवरुद्ध जडान. हामी त्यहाँ थाह अनौठो कुरा हो किनभने, पछिल्लो समय हामी संग कुरा उहाँलाई, उहाँले धेरै लज्जित थियो र पनि कराए । हामी अपिल दूतावास छ । परिवार सदस्य फ्रान्सिस्को प्रयोग हजारौं गर्न तरिकामा पाउन. उहाँलाई संग मास्को मा आए, आफ्नो मित्र, तिनीहरूले प्रहरी सम्पर्क ।, यो बारेमा हामीलाई सूचित कृपया. बारेमा पोस्ट को लोप फ्रान्सिस्को, एक हँसिला जो आए रूस लागि जयजयकार गर्न आफ्नो टीम विश्व कप मा, तेजी फैलाउन नेटवर्क भर छ । उहाँले विवाह छ । कसैले लेखिएको थियो एलेक्स । र पत्नी पहिलो थियो भन्ने महसुस गर्न केहि गलत छ किनभने, उहाँले प्रतिक्रिया थिएन भन्छ । केही समयपछि प्रकाशन बारेमा यस मामला भएको छ सक्रिय लेखन र मेक्सिकन मिडिया । यो प्रतिवेदक तल ट्रैक महिला, जो देखि उत्पन्न सबै जायका, र त्यो उनको ल्याए संस्करण को के भयो । यो एक फोहर कथा, बताउँछ. यो सत्य हो कि म झूठ बोल्यो भाइ, फ्रान्सिस्को निकोलस. मानिन्छ म आयोजित एक जवान जेल मा, हाँ उहाँलाई लागूपदार्थ र थियो । तर यो त छैन । अनुसार महिला, त्यो भेट फ्रान्सिस्को पट्टी मा, तिनीहरूले कहाँ देख्यो खेलमा पेरु, डेनमार्क.
निकोलस जान चढाएको गर्न अर्को संस्था, हामी इन्कार, सम्झनुहुन्छ. त्यसपछि उहाँले देखि लिएर फ्रान्सिस्को सबै नगद र क्रेडिट कार्ड । र हामी संग फ्रान्सिस्को गर्न गएका मलाई । फ्रान्सिस्को बायाँ मेरो घर, उहाँले एक पत्नी छ, तर राख्छ सँगै तिनीहरूलाई केवल एक बच्चा छ । त्यतिबेलादेखि, हामी कुरा गर्न, आफ्नो भाइ निकोलस. मैले सोधें किन भने फ्रान्सिस्को गर्न चाहनुहुन्छ छैन कहीं जान, सम्झनुहुन्छ. उहाँले चिन्तित थियो, र म छौँ पठाउन उसलाई घर मा एक ट्याक्सी । तर, सबै मिडिया लेखन भने, म फोन बन्द. यद्यपि यो आफ्नो भाइ म अवरुद्ध भएको थियो जब म चाहन्थे कल गर्न र भन्न फ्रान्सिस्को भूल मेरो पासपोर्ट प्रशंसक छ । सायद निकोलस भन्ने तथ्यलाई कारण फ्रान्सिस्को छ विवाह । बन्दोबस्त भन्छन् कि फ्रान्सिस्को मा थियो, उनको सुरक्षित र ध्वनि छ, यो भाइ को प्रशंसक थिएन पनि जवाफ चाहनुहुन्छ आफ्नो कल. म चाहन्छु मलाई प्राप्त, एक सरकारी माफी भन्छन्. उहाँले गलत अर्थ लगाइन्छ मलाई दुई देशका । अब फ्रान्सिस्को पहिले नै थियो, मलाई छोडेर.
आफ्नो भाइ एक ट्याक्सी लिएर
म पक्का गरे तिनीहरूले भेटे । भन्ने जानकारी फ्रान्सिस्को मा पुष्टि भएको थियो दूतावास को मेक्सिको मा रूस मा आफ्नो पृष्ठ मा ट्विटर । दूतावास कर्मचारी भ्रमण उहाँलाई उहाँले सबै सही स्वास्थ्य संग, रिपोर्ट भने । बस कसरी उहाँले अब को क्रम मा व्यक्तिगत जीवन मुद्दाहरू ।
← र विदेशीले भन्छन्"ब्राजिलका". विवाह गर्न एक ब्राजिलियन महिला
ब्राजिलका भावनाहरु. भिडियो च्याट हरेक स्वाद को लागि →